တူ Whom It မေ Concern | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » တူ Whom It မေ Concern
တူ Whom It မေ Concern
Posted by မြစပဲရိုး on Oct 28, 2015 in 2010/2012/2015 Election | 10 comments
.ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ အမှန်တရား လိုလားသည့် တတ်စွမ်းသူများ တင်ပြပြီး ကြိုးစားကြည့်ပေးကြပါရန် တိုက်တွန်း အကြံပြု လိုပါသည်။
အဲဒီ တစ်ရက် လေးအတွက် ရပ်ကွက် အလိုက် ဗော်လန်တီယာ လုပ်ပေးကြ မဲ့ သူများ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူ တွေ အရမ်းများပြီး ဗရုတ်ဗရက် လုပ်လို့ လဲ မဖြစ်ပါ။
ဒီချုပ် အပါအဝင် တစ်ခြား ဘာပါတီ တွေ နဲ့ မှ မသက်ဆိုင်တဲ့ ပြင်ပ ပညာရှင် လူ တွေ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဥပမာ ရန်ကုန်တို့ မန္တလေးတို့ မှာ ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ အသင်းအဖွဲ့ တွေ က လူမျိုး တွေ ကူညီ ပေးကြပါ။
(ခင်ဗျားတို့ ပရိုဂရမ် မှားလဲ ကျုပ်တို့ လူအား နဲ့ မှန်အောင် ကူလုပ်ပေးတယ် ပေါ့။)
ဟိုး နယ်ဖက် တွေမှာတော့ ပရဟိတ စိတ်ဝင်စားသူ လူငယ် တွေ အကူအညီ ရနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ အတွက် စရိတ် တွေကို ရွေးကော် မှ ကျခံပေးသင့်ပါတယ်။ မဟုတ်လဲ အကြွေးမှတ်ထားပါ။
တရားမျှတ မှု ရလာဒ် ကို စိတ်ရှင်းရှင်း သိနိုင်ဖို့ ဝိုင်းဝန်း ပေးကြဖို့ အချိန်ပါ။
တတ်နိုင်သူများ ကူ ကြပါ။ပံ့ပိုးပေးကြပါ။ ရွေးကော် ကို နားဖောက်ပေးနိုင်ရင် တွန်းပြီး နားဖောက်ပေးကြပါ။
RFA Burmese TV Channel uploadedanew video: MDY Voters.
မန္တလေးတိုင်း မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာထားတဲ့ မဲပေးခွင့်ရှိသူစာရင်းမှာ ၅ ထောင်ကျော် ပိုနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်ထဲက ရပ်ကွက်ပေါင်း ၂၁ ရပ်ကွက်ကို ကွင်းဆင်းလေ့လာရာမှာ အခုလို လူပိုစာရင်းတွေ တွေ့ရှိခဲ့တာလို့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က ပြောပါတယ်။ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်က မဲပေးခွင့်ရှိသူစာရင်းထဲမှာ ၁ဝ နှစ် ကျော်ကြာ မနေထိုင်တော့ဘဲ ပြောင်းရွှေ့သွားသူတွေရဲ့ နာမည်တွေ ပါနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပိုနေတဲ့လူစာရင်းကို ကော်မရှင်ဆီ တင်ပြပေမယ့် ဖြေရှင်းပေးတာ မရှိဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ မြို့နယ်အတော်များများမှာ မဲပေးခွင့်ရှိသူ သောင်းနဲ့ချီ ပိုနေကြောင်းနဲ့ အစိုးရထိပ်ပိုင်း အရာရှိတွေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ သိသိသာသာ ပိုနေကြောင်း NDL ဗဟိုက ပါတီအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ အသီးသီးကို အသိပေးထားပြီး၊ ပိုနေတဲ့စာရင်းတွေကို အမြန်ဆုံးစိစစ်ဖော်ထုတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးတွေကို တင်ပြကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အခုလို ပိုလျှံနေတဲ့စာရင်းတွေကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ မဲမသမာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိတယ်လို့လည်း NLD ဗဟိုက ပေးပို့တဲ့ အကြောင်းကြားစာမှာ ပါရှိပါတယ်။
တူ Whom It မေ Concern (2)
ဒဂုံမြို့နယ် မှာ မနေလို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင် မှာ ဟောပြောခွင့် မပေးရင်
သူနေတဲ့ အိမ်နားက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထဲ မှာ
လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်လို့ ရပါတယ် မဟုတ်လား။
တက္ကသိုလ်ကျောင်း ဆိုတာ အများပိုင် ဘဲ။
၁ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏ မြို့ဦးစေတီဘေးက ဘော်လုံးကွင်းမှာ အမေစုဟောပြောပွဲ လုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုမိန့်ရတယ်တဲ့ ….
Phyo minn aung
ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှု NLD ကတရားဝင် ထောက်ပြပြီ။
လူပိုမဲစာရင်း ပိုများနေမှု ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်မှန်ကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်ဟု NLD အထူးကြေညာချက်ထုတ်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ထုတ်ပြန်မှုတွင် ယခင် အစိုးရလက်ထက် ရာထူးကြီးများယူခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် လူပိုစာရင်းများ ပိုမို များပြားနေသည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟို ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် အထူးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။
“မဲစာရင်း ထုတ်ပြန်သည့်အခါတွင် ယခင်က အမှားများကို ပြင်ဆင်မှုအားနည်းသည်သာမက အခြားသော မှားယွင်းမှုများပါလာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထိုအမှားများအနက် ထူးခြားချက်မှာ လူပိုစာရင်းများကို တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယခင်အစိုးရလက်ထက် ကြီးမြင့်သော ရာထူး ရှိခဲ့သည် ပုဂ္ဂိုလ်များ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် မြို့နယ်များတွင် သိသာစွာ ပိုနေကြာင်း တွေ့ရှိရသည်” ဟု အထူး ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
မြို့နယ်အချို့တွင် လူအမည်စာရင်းအပို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုများနေသည်ဟုလည်း ဖေါ်ပြသည်။ ထို မဲစာရင်းအပိုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်အသီးသီးသို့ တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မည်သို့မျှ မဆောင်ရွက်ပေးဟုလည်း ပါရှိသည်။
ထိုအမှားများကြောင့် “လူပိုများ ပေးသောမဲသည် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်အရှုံးကို ဆုံးဖြတ်သွားမည်။ မဲမသမာမှုများ ဖြစ်လာနိုင်မည့် အလားအလာများ ဖြစ်သည်” ဟုလည်း ဖေါ်ပြထားသည်။
မဲစာရင်း အပိုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံးများသို့ တင်ပြကြရန်လည်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သူ၏ ပါတီဝင်များကို တိုက်တွန်းထားသည်။
လူပိုစရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်တွင် ၉၀,၀၀၀၊ နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေတွင် ၆၀,၀၀၀ နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် တစ်ပြည်နယ်လုံးတွင် ပထမ အကြိမ် မဲစာရင်း ထုတ်ပြန်စဉ်က မဲဆန္ဒပေးခွင့်ရှိသူ ၂၈ သိန်းကျော် ရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးအကြိမ် ထုတ်ပြန်မှုတွင် ၃၂ သိန်းကျော် ရှိလာသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိသည်။
ပေဖြစ်လျှင်ခံ.. တရံမမှု… တူဖြစ်ထုလော့… ဆိုတာမျိုး.. မလုပ်ရင်ပေါ့…။
ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေပဲ ပါတီအလုပ်ကို လုပ်တယ်
ဟိုလူ ဒီလူ မုန်းဖို့လည်း တစ်ခွန်းမှမပြောဘူး
နိုင်ငံကျော်လုပ်ကြံမှုကြီးကို လုံးဝပြည်ဖုံးကားချလုပ်ထားတာက ဘာပြဿနာမှ ထပ်မဖြစ်ချင်တော့တာကို ပြတယ်
မွတ်စလင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပါလာရင် ပြဿနာရှာနေကြမှာစိုးလို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထဲမှာတောင်မှ မွတ်စလင်မပါအောင်ဂရုစိုက်တယ်။
အဲ့ဒီလို လုပ်တဲ့အတွက် အထင်လွဲသူတွေလွဲကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်ကတော့ သဘောကျတယ်။ အပြတ်အသတ်မနိုင်ရင် အဆင်ပြေဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒီတော့ တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အစစအရာပြင်ဆင်ထားနိုင်မှ အဆင်ပြေမှာ။ ဒီအတွက် နားမလည်သူတွေ အပြစ်ပြောချင်ပြောပါစေ ကျုပ်ကတော့ ထောက်ခံတယ်။ ပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ ဒီလို ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ထားမှုကို ထောက်ခံမှာမဟုတ်ပေမယ့် သူတို့ဦးတည်တဲ့ ဘာသာရေးလူမျိုးရေးတွေ သူတို့လက်ညှိုးထိုးစရာတစ်ကွက်မှမရှိဖို့အတွက် ဒီလို လုပ်ရပ်ကို ဒီအချိန်မှာ ထောက်ခံတယ်။
ရိုးရိုးသားသား နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကို မြင်သာအောင်လို့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ချပြထားတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု မပြနိုင်ရင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတောင် ဖြစ်ခွင့်မရှိအောင် စီစဉ်ထားတယ်
ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ လူတွေသိဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းကို ထုတ်ထားတယ်။
အဲ့ဒါက မူဝါဒ ပဲ .. အဲ့ဒါ Road Map ပဲ။
အစဉ်အဆက် သူခိုးတွေကြောင့် အမျိုးပျောက်မတတ် ဒုက္ခရောက်နေခဲ့ကြရတဲ့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုချပြရဲတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေချည်း အရွေးခံတဲ့ပါတီကို ထောက်ခံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ တစ်ချက်လေးမှ သိမ်ငယ်စိတ်မပေါ်ဖူးဘူး။
လူတစ်ယောက်ကို ဓါးနဲ့ခုတ်ဖို့ဘယ်တုန်းကမှ အားမပေးဖူးဘူး
ပါတီကို ထောက်ခံသူတွေထဲမှာတောင်မှ မတရားဓါးနဲ့ခုတ်သူကို သူရဲကောင်းအဖြစ် သတ်မှတ်သူ မရှိဘူး။
အဲ့ဒါ NLD ပါတီ။
ကျုပ်ကတော့ NLD ပါတီဝင်မဟုတ်ပေမယ့် အခုအချိန် အခုအခြေအနေရ NLD ပါတီကိုထောက်ခံသူ အားပေးသူဖြစ်ရတာတောင်မှ ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးဘူး။ အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။
ဝမ်းသာပီတိများစွာဖြင့် NLD ပါတီအား ယုံကြည်စွာထောက်ခံ ဂုဏ်ယူလျှက်
အခု NLD တံဆိပ် နဲ့ လူတစ်ချို့က တစ်ဖက် ကို ဓားနဲ့ ပြန်ခုတ်ဖို့ ကြိမ်းဝါးနေတယ် လို့ သတိပေးစာ တွေ မြင်နေရတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ဒီချုပ် ထဲ မလဲ အကောင်းအဆိုး ရှိနေတာမို့ ဘယ်သူ လုပ်လုပ် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အရေးယူဖို့ ပြောထားသင့်တယ်။
ထိပ်ပိုင်း က ပြောတဲ့ စကား တွေထဲမှာ ကို စည်းလွတ် နေပြီ မို့ ယုတ်မာမှု တွေ ပိုများလာနိုင်ပါတယ်။
အားလုံး သတိဝီရိယ နဲ့ အချင်းချင်း သတိပေးပြီး နေကြပါ။
ငိုးမအဆိုးဓမြ သတ္တိရှိ ငါ့လာဖန်းဗါလား.. ခုဒေါ့ ဗါမှ မလှုပ်နိုင်တဲ့ ဒီချုပ်ကို အနိုင်ကျင့်သယ်.. ရီးဘဲ။
နီ ကို ဖန်း ရအောင် နီက လူ မို့လို့ လားဟဲ့။
နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့က သုဝဏ္ဏ မြို့ဦးစေတီ ကွင်းအတွင်း….အမေစု ပြောသမျှ စကားထဲမှာ…
.ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ… တစ်ရက်ကို တစ်မျိုး…အမျိုးမျိုးသော..သတ်မှတ်ချက်တွေ…ပြောင်းလဲထုတ်ပြန်နေကြောင်း ပြောသွားတယ်…။
ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်နေ့မှာ… သိသင့်တာ..သိနေပြီးသား ဖြစ်အောင်… nld ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်း… အချိန်နဲ့တပြေးညီ စောင့်ကြည့် / ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုပါ…လို့ တိုက်တွန်းသွားတယ်.. ။